Citation ary mpiara-mitanisa ny SEO eo an-toerana | Martech Zone
Citation ary mpiara-mitanisa ny SEO eo an-toerana
Talata, Aprily 2, 2013 Zoma, Septambra 14, 2018 Douglas Karr
Ny algorithm pagerank dia gamed amin'ny ankapobeny satria ny hany takiana dia olona SEO satroka mainty manangana rohy manan-katao manan-katao miverina amin'ny tranokala. Rehefa mandeha ny fotoana, na aiza na aiza no nananganana ny rohy, dia hiakatra ny laharan'ny toerana. Fantatr'i Google fa gamed ny valin'ny motera fikarohana ary avy eo dia nanatanjaka ny algorithman'izy ireo haka filaharana kalitao hafa. Ny kalitaon'ny tranokala mampifandray sy ny maha-zava-dehibe ny atiny dia nitana andraikitra ary koa ny fomba nalaza ny tranokala mampifandray sy ny toerana itodiana dia ao anatin'ny media sosialy.
Inona no atao hoe Citation? Co-Citations?
Raha ny valin'ny motera fikarohana eo an-toerana sy ny laharana ho an'ny orinasanao, tsy ny backlinks sy ny mention irery no lalao. Mitombo hatrany ny lazan'ny Google amin'ny teny nalaina amin'ny famaritana ny fahamendrehana sy ny fahefan'ny orinasa amin'ny valin'ny fikarohana eo an-toerana. Tsy rohy ny citation, izy ireo dia soratra izay miavaka amin'ny soratra hafa amin'ny pejy. Ohatra iray ny adiresy feno sy nomeraon-telefaona an'ny orinasanao.
Raha tsy misy rohy dia afaka mamaritra ny lazan'ny orinasanao eo an-toerana amin'ny firy i Google tranokala avo lenta no mitanisa ny adiresy sy / na nomeraon-telefaonanao. Ireo dia fantatra amin'ny hoe citation. Ary ny tranokala hafa izay mitanisa ny citation mitovy amin'izany izay mifandray amin'ny tranokala dia co-citation. Eritrereto izany… ny adiresy voatanisa ao amin'ny tranonkala rehetra dia mety hiteraka fifandraisana izay ilain'i Google hamaritana ny fifandraisana misy eo amin'ny atiny sy ny orinasa eo an-toerana.
Ny lisitra ny adiresy misy anao sy ny nomeraon-telefaonanao amin'ny pejy misy teny fanalahidy mifandraika amin'ny orinasanao dia afaka manome anao ny laharana ho an'io fitambarana teny lakile io amin'ny valin'ny fikarohana eo an-toerana.
Midika ve izany fa tokony handeha hividy fonosana fandefasana lahatahiry ho an'ny orinasanao ianao? Tsia, tsia. Google dia manomboka manavakavaka ireo lahatahiry ambany kalitao izay fambolena rohy fotsiny ho an'ny orinasa. Na izany aza, manisy fiheverana bebe kokoa ny citation amin'ny tranokala avo lenta izay mitanisa ny mombamomba ny orinasanao izy ireo. Ny asanao dia ny miantoka fa ny vaovao omena dia vaovao sy marina!
Inona no azonao atao hanampiana?
Aza hadino ny mampiditra ny anao anarana, adiresy ary nomeraon-telefaona manerana ny tranokalanao. Hamarino tsara fa mifanaraka amin'ny tranonkala rehetra ny fampahalalana voatanisao. Manoro hevitra ny mpanjifanay izahay hamoaka mazava tsara an'io fampahalalana io amin'ny pejy rehetra.
Tanisao sy tazomy ny orinasanao miaraka amin'i Google sy Bing.
mampiasa rakotra manankarena ho an'ny orinasa eo an-toerana ao anatin'ny tranonkalanao hahafahan'ny motera fikarohana mikaroka ny fampahalalana ara-jeografika ilaina.
Rehefa misy ny fotoana mety hilazana ny asanao ao anaty lahatsoratra iray, famoahana gazety na lahatsoratra bilaogy - aza hadino izany ampidiro ny adiresy mailaka feno sy ny nomeraon-telefaonanao. Ireto mitanisa ao anaty ny teny fanalahidy tadiavinao hifandraisany dia tena manampy.
Ahoana no ahitanao tranokala Citation?
Whitespark dia manana mpitanisa citer ao an-toerana. Ny fitaovana dia ahafahanao miditra amin'ny keyphrases ary mamantatra ireo fiovana hafa amin'ny prhases manan-danja. Ny fitaovana dia mamokatra ny lisitry ny tranokala mitanisa ireo toerana ambony. Ary koa, ny rafitra dia mamela anao hanara-maso an'izay mitanisa efa anananao mba tsy handanianao fotoana.
Tags: bdailyCitationsmpiara-Citationscocitationgoogle citationfikarohana eo an-toeranadiarin'ny milina fikarohana